FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA CANE CORSO ITALIANO - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana cane Corso Italiano
Hank (havia) ny Cane Corso amin'ny faha-4 taonany miaraka amin'i Rosie the Cane Corso sakaizany akaiky indrindra amin'ny 10 volana. Jereo bebe kokoa ny Hank sy Rosie .
Ny Cane Corso Italiano dia alika antonony lehibe, vita mafy nefa kanto, manana hozatra matanjaka sy lava. Miavaka be izy, maneho ny tanjaka sy ny hakingana ary ny fiaretana. Ny fampifanarahana ankapobeny dia ny biby mesomorphic izay lava noho ny hahavony amin'ny malazo ny vatany, mirindra mifanaraka amin'ny endrika sy tsy fitoviana manoloana ny mombamomba. Ny sakelaka dia malalaka sy lalina. Ny sakan'ny sakanana dia tsy maintsy hitovy amin'ny halavany izay mahatratra 3.4 / 10 amin'ny halavan'ny loha. Ny halaliny dia mihoatra ny 50% ny halavan'ny monja. Noho ny fitovizan'ny sisin'ny vava sy ny fahafenoany ary ny sakan'ny valanoranony manontolo dia fisaka sy toradroa ny tarehy eo anoloana. Ny tetezana orona dia misy mombamomba ny rectilinear ary somary fisaka ilay izy. Ny mombamomba ny ambany amin'ny molotra dia voafaritry ny molotra ambony ny faritra ambanin'ny vava dia mampiseho sakamalaho kely. Ny fijanonana dia voamariky ny marika noho ny sinus frontal tena mandroso sy mibontsina ary noho ireo andohalambo superciliary malaza. Somary arched ny hatoka. Ny endrika tendany dia misy fizarana boribory boribory, matanjaka sy hozatra. Tady, matanjaka ary hozatra ny vatana. Somary matevina ny hoditra. Ny vozony dia azo atao tsy misy dewlap. Tsy tokony hisy ketrona ny loha. Mainty ny lokon'ny fonon'ny moka. Ny loko amin'ny faladian sy ny hoho dia tsy maintsy maizina. Ny palitao dia volo fohy fa tsy malama, miaraka amin'ny firafitra vitreous, mamiratra, miraikitra, mafy, matevina be, miaraka amina sosona maivana manjary matevina amin'ny ririnina (nefa tsy maniry ny volony misarona). Ny halavany eo ho eo dia eo ho eo. 2 / 2.5 cm. Amin'ny malazo, ny rump, ny sisin'ny lamosin'ny feny ary amin'ny rambony dia mahatratra eo ho eo. 3 sm nefa tsy mamorona sisin-tany. Amin'ny volom-bava dia fohy ny volo, malama, mifikitra ary tsy mihoatra ny 1 / 1,5 cm. Loko: mainty, volondavenona, vatosoa, volondavenona maizina, manga / volondavenona, volondavenona maivana, zana-diera, zana-trondro mainty ary tubby (dian-kapoka tsara amin'ny lokon'ny volondavenona sy volondavenona). Ao amin'ny lohahevitra fawn sy tubby dia misy sarontava mainty na volondavenona fotsiny eo am-bava ary tsy tokony hihoatra ny mason'ny maso. Kitapo fotsy kely eo amin'ny tratra, eo amin'ny tendron'ny tongotra ary eo amin'ny tetezana orona no ekena.
Tena tsy mivadika, vonona ny hampifaly sy hangina manodidina ny trano, ny Cane Corso dia tena manan-tsaina ary mahay mampiofana. Mavitrika sy misaina mihitsy izy, alika fiambenana sy fiarovana tsy mitovy. Ny Cane Corso Italiano dia tsara miaraka amin'ny ankizy ao amin'ny fianakaviana. Mahalala fomba sy be fitiavana amin'ny tompony, miaro izy ireo nefa malemy paika. Ny Cane Corso dia manana toetra milamina tokoa. Izy io dia mahatonga alika mpiambina tena tsara. Tsy hivezivezy ao an-trano izany. Mifikitra amin'ny tompony izy ireo. Raha ilaina dia lasa mpiaro olona be trano sy fananana be herimpo izy. Ny Cane Corso dia tsy alika mpiady. Alika mahery miasa nandritra ny an-jatony taona maro izy ireo. Noho izany dia tsy hivoaka 'hitady ady' izy ireo, fa amin'ny lafiny hafa dia tsy hihemotra amin'ny alika hafa izay manandrana manjaka azy ireo. Ny Cane Corso dia mitaky tompona efa za-draharaha izay mahalala ny fomba hanehoana fahefana voajanahary amin'ny alika. Mety ho mahery setra amin'ny olon-tsy fantatra sy alika hafa izany raha tsy izany ifaneraserana na raha mahita ny tenany ambonin'olombelona ao amin'ny pecking order . Tokony hifaneraserana am-pitandremana izany rehefa zaza. Ampirisihina mafy ireo alika ireo mba ho lasa feno fanofanana voaofana . Raha ny Cane Corso dia voaofana tanteraka amin'ny tompona iray izay hentitra, matoky tena ary tsy miovaova, ny fitsipika apetraka dia tsy maintsy arahin'ilay alika ary mametraka fetra mazava amin'izay azony atao sy tsy azony atao, miaraka amin'ny fanomezana ny sahaza azy isan'andro fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana , ny Cane Corso dia ho mpiara-miasa akaiky. Ianaro izay mahatonga ny tick biby biby ary mitsabo araka ny tokony ho izy ny taranany. Mampiahiahy ny olon-tsy fantatra, fa mahafinaritra miaraka amin'ny fianakaviana, Corso mahay mandanjalanja dia hiaritra olon-tsy fantatra raha eo ny tompony. Rahoviana natsangana tsara , ny alika dia tokony hanaiky ny mpikambana rehetra ao amin'ny fianakaviana. Ny sofina Corso dia nokapaina tany am-boalohany mba hanampiana azy ireo handroaka ny amboadia raha miaro ny biby fiompy. Ny sofin'izy ireo dia mora tohina kokoa noho ny amin'ny vatany sisa. Amin'ny ankapobeny dia tsy mahatanty fanaintainana izy ireo raha tsy izany, maro ny tompon'ny Corso no diso fanantenana mahita fa ny rafitra fitehirizana herinaratra 'tsy hita maso' dia tsy mahasakana ny alikany.
Haavony: Lehilahy 24 - 27 santimetatra (64 - 68 cm) Vehivavy 23 - 25 santimetatra (60 - 64 cm)
Milanja: Lehilahy 99 - 110 pounds (45 - 50 kg) Vavy 88 - 99 pounds (40 - 45 kg)
Alika matanjaka io miaraka amin'ny taolana mahazatra sy ny olana iraisan'ny karazany goavambe.
Ny Cane Corso dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampy ny fanatanjahan-tena. Ho afa-po miaina any ivelany izy ireo raha manana fialofana ampy.
Ity karazana atletisma ity dia mila fanatanjahan-tena matetika. Izy ireo dia mpiara-miasa amin'ny jogging tena tsara ary raha tsy atao jogging isan'andro dia tokony horaisina farafaharatsiny iray dia an-tongotra lavitra sy lava .
Ny Cane Corso dia tsy mitaky fikarakarana be loatra. Indraindray borosy sy borosy hanala volo maty. Ity karazana ity dia mpamafa hazavana. Mety misy Cane Corso sasany drool na slobber , indrindra amin'ny andro mafana na rehefa misotro.
Ny Cane Corso Italiano dia karazany Cane Corso voalohany. Tany Italia no niandohany. Misy ifandraisany akaiky amin'ny Neapolitan Mastiff . Nandritra ny taona maro dia mpiara-miasa sarobidy amin'ny italiana izy. Ampiasaina ho fananana, omby ary alika mpiambina manokana ary ampiasaina amin'ny tanjona fihazana koa. Tato ho ato dia nahita faritra fitehirizana tena tsara any atsimon'i Italia izy, indrindra any Puglia, Lucania ary Sannio. Ny anarana hoe Cane Corso dia midika hoe 'alika mihazakazaka' amin'ny teny italianina. Ny kio dia midika hoe 'alika' ary Corso dia midika hoe 'mazava ho azy'. Coursing dia fanatanjahan-tena amin'ny lalao haza miaraka amin'ny alika izay manaraka ny fahitana fa tsy amin'ny fofona. Ny Cane Corso dia nekena ho kilasy isan-karazany AKC tamin'ny 2008.
asehoy ahy ny sarin'ny pitbull
Zeus the Italian Mastiff tamin'ny taona 1
Khan ilay zanak'alika Cane Corso Italiano manana maso manga amin'ny 9 herinandro— 9 herinandro i 'Khan ary milanja 20 pounds. Lehilahy kely marani-tsaina izy izay efa naneho famantarana miambina ny trano . Mianatra amin'ny fotoana rehetra amin'ny zanany 4 taona izy Great Dane rahavavy, Zendri. Navoaka ihany koa ny zanany kely anatiny ary tiany ny zandriny lahy. '
Mamelombelona ny Cane Corso Italiano amin'ny 2 1/2 taona
Solomon GCH Campo nataon'i RockHaven the Cane Corso Italiano amin'ny faha-5 taonany— 'Solomon no Tompondakan'ny AKC voalohany indrindra amin'ny karazan-kazo. Manana titre miasa marobe koa izy. '
'Nero sy Cassie dia vokatry ny fiompiana avo lenta avy amin'ny fantsom-bokatra any ivelany sy tsara indrindra any ivelany. Izy ireo dia AKC ary voasoratra anarana ICCF. ' Sary natolotry ny Brusco's Cane Corso
'Ity i Nero amin'ny 1 1/2 taona, milanja 125 pounds. Nero dia vokatry ny fiompiana faran'izay tsara ny ra any ivelany sy ny any ivelany. Tonga lafatra tanteraka ny toetrany ary heveriko fa hanaiky ianao fa ny fanamafisany azy no fomba nikasa ny karazany. Tsy manam-potoana hanehoana azy aho, fa ataoko fa miteny ho azy ireo ny sariny. AKC izy ary voasoratra anarana ICCF. ' Sary natolotry ny Brusco's Cane Corso
'Castano Savrona aka Cassie dia avy amin'ny tsipika iray izay tsy misy afa-tsy ny faran'izay tsara amin'ny ra any ivelany sy any ivelany no ao anatiny. Izy no zafikelin'ny Arrow, angano. AKC izy ary voasoratra anarana ICCF. ' Sary natolotry ny Brusco's Cane Corso
Tompondakan'i Italiana Duce, sary nahazoana lalana avy tamin'i Burgwald Kennel, nanomboka tamin'ny 1995
Sary natolotr'i Stormy Winns Kennel
Barone the Cane Corso puppy mandritra ny 12 herinandro
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Cane Corso
Sary cane corso 1
Sary cane corso 2
Sary cane Corso 3
Alika Cane Corso Italiano: Sarivongana Vintage azo angonina
sary rehetra alika miteraka manaraka ny abidia
lavaka omby Aostraliana omby alika Mix
Aostraliana mpiandry ondry volontsôkôlà sy ny mainty